Mabhuku aJules Verne hupfumi hukuru hwekunyora hwevanhu. | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Fikisheni yesainzi, Vanyori, Type, Literature, Novela
Jules Verne mabhuku.
Kutaura nezvemabhuku aJules Verne kutaura nezveimwe yehupfumi hwakanyanya hwenyika mabhuku. Munyori uyu uye mudetembi akazvarwa musi wa8 Kukadzi 1828 muNantes, France. Basa rake rakakura rakapfuura uye rinozivikanwa pasi rose seimwe yemipiro mikuru uye yakakosha yakatungamira kutanga kwesainzi genre mumabhuku. Mushure mehupenyu hwakazara nezviitiko, pazera remakore makumi manomwe nemanomwe uye vachiri kunyora, akafa nechirwere cheshuga.
Verne aive murume ane fungidziro pamberi penguva yake, uye izvo zvakaratidzwa pachena mubasa rake, muchokwadi, kune zvakawanda zvinoda kuziva nezve hupenyu hwake. Haana kungouya chete nemaonero ekuona, iye zvakare akakwanisa kutsanangura zvigadzirwa nemidziyo zvaiita senge zvakapenga panguva iyoyo, asi zvakagadzirwa panguva imwe chete. Kunyange zvakadaro, yakamira muEurope yose nekuda kweiyo surrealist maitironguva refu asati afanotaura nezveramangwana mumabhuku ake emazuva ano.
1 Pamberi pemabhuku
2 Jules Verne, kamwe murudo
4 Zvimedu zvezvimwe zvinonyanya kuzivikanwa mabhuku eJules Verne
4.1 Pasi Pasi Pose mumazuva makumi masere
4.2 Makumi maviri ezviuru zvemaligi pasi peGungwa
5 Musoro wemabhuku eJules Verne
6 Kugadziridza uye kugadzira
Kuva dangwe revakoma nevanun'una uye achiuya achibva kumhuri yakapfuma, Verne akabudirira kupedza zvidzidzo zvake zvekutanga kuStan-Stanislas College. Gare gare akaenda kuRoyal Lyceum yeNantes uye akapedza kudzidza semudzidzi anoshamisa. Munguva yese iyoyo Julio akatanga kukwezvwa nesainzi, uye akatanga kuda kukuru nhetembo.
Muna 1847, yakapihwa mari nababa vake, akatamira kuParis kunodzidza zvemutemo. Ikoko akapinda mumadhora ekunyora uye akasangana nevanhu vaive nesimba rakakura mukusimudzira basa rake, saAlexandre Dumas baba, uye nemwanakomana wavo. Panguva iyoyo Julio akanyora mutambo Alexander VI, uye akabva atanga nhanho yake semunyori wemitambo.
Achiri muGuta reKwayedza akaita hushamwari nevanhu vaibuda panguva iyoyo. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Nadar, baba vemifananidzo yekutenga mifananidzo, muimbi wekutanga kutora France kubva kumatenga akaiswa pabharuni remhepo inopisa. Kubudikidza ne, Verne akatanga kufarira pfungwa yekubhururuka uye mikana yayo yakakura.
Muna 1849 akazopedza kudzidza segweta, achizadzisa chishuwo chababa vake. Asi Julio, asingakendengi, akaramba zano rekutevera basa rake. Gare gare, nekuda kwekuramba kwake, rubatsiro rwemari rwaakagamuchira kubva kumhuri yake rwakabviswa.
Kushayikwa kwake kwemari, chikafu uye kushushikana zvakamuendesa kurwara nezvinetso zvakasiyana zvehutano yakabatana neyekugaya nzira, mukuwedzera kukuvadza chirwere cheshuga, akatsanangura izvi kuna amai vake mutsamba. Kubva ipapo, Jules Verne akatanga kuzvipira zvizere kune tsamba.
Jules Verne, kamwe murudo
Pazera regumi nerimwe, Verne akadanana nehama yake, Coralie; akafuridzira nhetembo dzake dzekutanga. Muchokwadi, akakwira chikepe chemushambadzi chaienda kumaIndies kuti amutorere pearl pendant sehumbowo hwerudo rwake. Zvisinei, baba vake vakazviziva ndokumuita kuti aburuke muchikepe pakarepo. Vechidiki Jules Verne vakatanga kunyora nyaya kubva ipapo.
Kwemakore, paakaenda kunogara kuParis, Coralie akapfimbana uye akazvipira kuzvidzidzo nekunyora. Yakanga isiri kusvika 1856 kuti akatanga kufarira mukadzi. Muna Ndira 1857 akaroora Honorine Deviane Morel, mukadzi akange ave chirikadzi uye aine vanasikana vaviri; Valentine naSuzanne.
Verne akaroora nekuda kwekureruka uyezve nechinangwa chekuzadza mweya wekusagadzikana, asi muchato hauna kumubatsira kuporesa marwadzo ake, haana kumbofara. Mushure memakore mana tichigara pamwe chete, Honorine akava nepamuviri nemwana wekutanga uye wega waJulio, Michel Verne., uye munguva idzodzo munyori anga achigadzirira kuenda parwendo.
Imwe yemataurirwo akakurumbira aJules Verne - Akifrases.com.
Julio akatanga kunyora kubva pazera diki kunzwa Akafemerwa nenyaya dzaakataurirwa nemudzidzisi wake mukirasi nezve murume wake, aive mufambisi wengarava. Munyori aive nechido chakanyanyisa chekuverenga uye aifarira kuunganidza zvinyorwa zvine chekuita nesainzi nemagazini. Aive murume wekufunga zvakadzama, kwete pasina maturo mazwi ake ari pakati pezvakanakisa mune zvinyorwa zvepasirese.
Panguva yekugara kwake kuParis akapedza maawa mazhinji muraibhurari achitsvaga kudzidza zvese. Akashandisa chikamu chikuru chemari yaakatumirwa nababa vake kutenga mabhuku, kunyanya pa: mainjiniya, nyeredzi uye jogirafi.
Kubva muna 1859 Julio akatanga kuona rudo rwake rwekufamba uye akawana sosi huru yekufemerwa kunyora nezvavo. Zvisinei, zvinopesana nekutenda kwakakurumbira, nzendo dzaJules Verne dzaive shoma kwazvo.
Jules Verne: kusikwa kwezvikonzero zvekuita
Zvimedu zvezvimwe zvinonyanya kuzivikanwa mabhuku eJules Verne
Heano akatorwa kubva kune mamwe mabasa anozivikanwa aJules Verne:
Pasi Pasi Pose mumazuva makumi masere
“Chitima chainge chasimuka panguva yakatarwa. Akanga akatakura vafambi vakati wandei, vamwe vashandi, vashandi vehurumende pamwe neopiyamu uye vatengesi veindigo vaakadana traffic yake kuchamhembe kwepeninsula… ”
Makumi maviri ezviuru zvemaligi pasi peGungwa
"Chokwadi, kwenguva yakati kuti ngarava dzinoverengeka dzakasangana ne" chinhu chikuru "pagungwa, chinhu chakareba, fusiform, dzimwe nguva phosphorescent chinhu, chakakura zvisingaite uye chinokurumidza kupfuura whale ...".
Mufananidzo waJules Verne.
Musoro wemabhuku eJules Verne
Ruzhinji rwe Mabasa aVerne ari ezvekushanya uye kuenda kunzvimbo dzisingazivikanwe, uko kusina kumbobvira kwamboitika. Asi Julio aive nezvakawanda muhupenyu hwake semunyori.
Pakutanga, sababa vesainzi ngano, zvinyorwa zvake zvainyanyo kuenderana nehunyanzvi hwekufambira mberi. Mamwe anoshanda kubva padanho iri ndeaya: Kubva Pasi kusvika kumwedzi, Iyo Adventures yaKaputeni Hatteras, Rwendo kuenda kuCentre yePasi.
Nekufamba kwenguva, nyaya yemanovhero ake yakave yakakomba uye yakaderera surreal.. Akaramba achishandisa sainzi ngano, asi izvozvi zvaisanganisirawo nhoroondo dzehupenyu, huwandu hwevanhu, uye nzendo kunzvimbo dziripo. Mabasa ake anomira pachena: Pasi Pasi Pose mumazuva makumi masere y Nyika ye furs.
Pakupedzisira, Mumakore ake ekupedzisira kuneta kwake kwakacherechedzwa, uye zvinyorwa zvake zvekunyora zvinoratidza rima rakawanda uye kusava netariro. Verne akamira kutora sainzi sechinhu chakabatsira kukura kwevanhu. Pane kudaro, akaishandisa sevortex inopedza nharaunda pamwe nezvematongerwo enyika nehupfumi. Julio akataura zvinangwa zvake mumabasa akadai se: Adhama wekusingaperiuye Kurasa kwaJonathan.
Kugadziridza uye kugadzira
Kutanga kwaJules Verne munyika yekunyora kwanga kusiri nyore. Muna 1862, vachikurudzirwa naNadar, Julio akatendeukira kune mupepeti wepashure wezhinji webasa rake, Pierre-Jules Hetzel. Chinyorwa chakatumirwa chaive icho che Mavhiki mashanu mubharuni, iro rekutanga basa rakavhura nhevedzano yemazita anoumba Zvinoshamisa nzendo.
Mushure maizvozvo, Julio akabvuma kondirakiti yakapihwa naHetzel, iyo yaiti ainyora mabhuku maviri pagore pamakumi makumi maviri emafranc., iyo yaaifanira kutamira kuAmiens. Zvibereko zvekutanga zve Zvinoshamisa nzendo dzakaburitswa mumagazini yekunyora yaHetzel, Magasin d'Éducation et de Récréation.
Hetzel ainetseka nezvekuonekwa kwe Zvinoshamisa nzendo paakaona kuti veruzhinji vakwezva kwaari. Saka akatanga kugadzira zvivharo zvemazita nemaitiro emakadhibhodhi. Iyi nzira inosanganisira kuisa basa uchishandisa kadhibhodhi pachivharo chakarongedzwa nemucheka wakarukwa neshinda. Izvi zvakawedzera zvakanyanya kukosha uye mukurumbira kumabhuku aVerne, zvichivaita mukurumbira munzanga yepamusoro.
Munyori Jules Verne.
Achiri pamubhedha werufu muna 1905, Jules Verne akanyora Zvinoshamisa nzendo, y mushure mekufa kwake, akati wandei emabasa ake akaramba achiburitswa. Mumwe wavo aive "bhuku rake rakarasika", Paris muzana ramakumi maviri, yakanyorwa muna 1989, ikabudiswa muna 1994.
Ruzivo uye fungidziro yaJulio zvakamutungamira kuti aburitse mabasa ehuremu hukuru mumhando yesainzi yekunyepedzera uye zvinyorwa zvepasirese. Pakati pezana ramakore rechiXNUMX, Verne aive pamberi pekufambira mberi kwesainzi; uye aigara achiziva kuti fungidziro yake yakanga isiri chinhu kunze kweicho chokwadi cheremangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Jules Verne mabhuku
Ndakaifarira chaizvo, yakandipa senge mhinduro nhatu dzebasa rangu rechikoro, ndatenda
Chinangwa chine c kwete s
Washington Irving, mumwe weakakurumbira eAmerican